Umoya - ubunzima
Maternity Umntwana kwaye uyamnyamekela
Ukubonakala komntwana kwintsapho akuyiyo kuphela injabulo nolonwabo, kodwa kunye nobunzima abathile, kwaye xa umntwana esezwini ezalwa, kwaye kunye nekhefu elifutshane emva kokuqala, zonke iimvakalelo kunye neengxaki zanda ubuncinane kabini. Abaninzi abanomama bemozulu bayesaba ukuvela kweengxaki, ukwesaba okuhlukahlukeneyo kunye nokungabaza kukuphazamisa ngexesha lokukhulelwa kwesibili. Omnye uloyiko lokuba uthando lwakhe alaneleyo kwiintsana ezimbini, kwaye umntu uyaluyika ngenxa yobunzima bokuqala basekhaya. Ukuba ukholelwa iingxelo zabamama babantwana kwi-intanethi, kunzima kuphela ngonyaka wokuqala, ngoko kuba lula kakhulu.
Okokuqala, ngexesha lokukhulelwa kuyimfuneko ukulungiselela umntwana osekhulile ukuvela kwilungu elitsha lentsapho. Chaza kwi-crumb ukuba kungekudala uza kuba nomhlobo omhle kunye nomntu osondeleyo, umntakwabo okanye udadewabo. Fundisa umntwana wakho ukuzimela, uze uqiniseke ukumdumisa ukuba unokunceda ngandlela-thile. Ukuphakanyiswa kwemozulu akulona kunzima kuwe xa usondela kuyo, ngokungenangqondo nangaphandle kwemizwa engadingekile. Kubalulekile ukulungelelanisa imo yosuku lwemozulu ukuze kungabikho iimeko xa umama kufuneka aqothulwe phakathi kweentsana ezimbini.
Iimpawu kunye neengxaki zokuzala abantwana-imozulu
Ekubonakaleni kwabantwana, imozulu kwintsapho inamanani ayo kunye neendlwana. Inzuzo eyona nto, kukuba, ukuba abantwana baya kuba ngabahlobo besifuba kwixesha elizayo, iimfuno eziqhelekileyo kunye nemidlalo iya kubakhokelela. Ingxabano enzima kakhulu "ngokuba" imozulu yisisombululo semali yezimali, ubuncinci kwisigaba sokuqala: izinto, iimpahla, iifayili ziya kuzuza ilifa ukusuka kumntwana omdala kunomncinci, oya kulondoloza uhlahlo lwabiwo-mali. Oomama abaninzi banemibuzo: indlela yokuhamba kunye ne-pogodkami? Kwaye ilapha isele ingxaki, kodwa ixazululwe! Yonke into incike kwixesha lonyaka, ubudala babantwana kunye nesimo sabo sengqondo, ubukho bezoncedisi eziseduze, kunye nendlela eqhelekileyo yobomi bomama. Ukunceda ufike umqhubi ophindwe kabini okanye ukuthungela umntwana; izalamane ezikulungele ukuhamba nawe ngokuhamba; indawo yokudlala yabantwana. Into ebalulekileyo, khumbula: ukuzalwa kwemozulu akufanele kukuqhubekele ekubeni nexhala, ngexesha elifanelekileyo uza kuba neenkcubeko zakho, kunye nokuhamba kunye nabantwana ababini, uhlonipheke kwi-automatism, uya kuqala ukuvuyisa abantwana kuphela.
Ngoku, kunqabileyo nabani na osenza isigqibo sokuba umntwana wesithathu, kwaye ukubonakala kwintsapho yezohlukeneyo zesimo sezesondo kukudibanisa ngqo. Umama, uhamba ukusuka komnye umyalelo ukuya kwesinye, uzalisekisa umsebenzi wakhe wesibini kwaye emva koko unokuphumelela ukwakha umsebenzi ngaphandle kokuthatha ikhefu.
Ukuqonda indlela yokujamelana ne-pogodki kuza kuphela ngamava, kungabikho nantoni na onokudandatheka kunye nokwesaba. Qiniseka ukuba ubonise uthando lwakho kuzo zombini iimvuthu, mhlawumbi ekuqaleni kokunye kumntwana okhulileyo, ukuze akanalo umona wesikhwele okanye ukungabi namsebenzi. Xoxa nabanye bamama kwimozulu, wabelane ngeemvakalelo zakho kunye namava. Qiniseka, awusoze wazisola ngesinyathelo esinjalo, kwaye emva kwexesha, uya kukhumbula le nkathi yobomi ngokumomotheka nokunyamezela.
Imidlalo yabantwana abaneminyaka eli-1 ubudala
Umdlalo we-Didactic "Fumana i-Couple"
Izakhono zezingane ezineminyaka emi-2 ubudala
Indlela yokwenza i-herbarium?
Indlela yokujonga ubungakanani bengubo yomntwana?
Intombi kaJim Carrey
Ilokotri yabantwana ngokuzalwa kwabo
Indlela yokukhetha i-inhalers kubantwana nakubantu abadala?
I-Alimony yomntwana ngaphandle komtshato
Yintoni kufuneka umntwana akwazi ukuyenza kwiminyaka emi-2?
Abantwana bakaBritney Spears
Umdlalo wemithetho yendlela
Umthandazo xa uhlanganisa intambo ebomvu kwisandla sakho
Ukuhlaziywa kwencwadi ethi "Hilda and Bird Parade", uLuka Pearson
Iqhwitha eyenziwe yengubo
Ukugqiba indlu kwiplanga - iingcamango ezingcono kwizinto zangaphakathi nezangaphandle
Ukukhawulwa kwe-spine - unyango
I-Carnelian's Stone - Properties Properties
Iingubo zeCocktail zize zizalise ngokupheleleyo - izitayela ezinokhenketho kunye nesitayela
Ikhaya laziva libhokisi
URita Ora, uTaini Tempa kunye nezinye iinkwenkwezi eTeenis nase Falconeri zibonise eVerona
U-Pamela Anderson utshintshile ngaphaya kwesaziso ngenxa yeplastiki
I-Kyphosis ye-thoracic spine
Isikrini kwindawo yokuhlambela
Vibro Crop for Weight Loss
Indlela yokufundisa umntwana ukuba athethe ileta p?
Duck ngemifuno ehovini
Isigubhu ekwibumbi lokulala
© 2022 xh.tierient.com